Displaying 31-40 of 364 results.
सहमति कार्यान्वयन नभए निर्वाचनमा भाग लिदैनौं : अध्यक्ष ठाकुर
बिराटनगर, १२ चैत । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारले संविधान संसोधनका विषयमा गरेको सैद्धान्तिक सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वय नगरेमा आफूहरु निर्वाचनमा भाग नलिने स्पष्ट पारेका छन् ।
तमलोपा जिल्ला कार्यसमिति मोरङले शनि
सरकारको कारण भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्यो, यसको विकल्प खोज्नु पर्छ : अध्यक्ष यादब
काठमाडौं, १२ चैत । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने संकेत गरेका छन् ।
संघीय गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका अध्यक्ष यादबले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा शनिबार भएको साक्षात
संसदबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा जाने मधेसी मोर्चाका साँसदहरुको तयारी
काठमाडौं, १२ चैत । संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेसी मोर्चाले आफुहरुले उठाएका सवै विषयमा संविधान संशोधन नभए संसदबाट सामुहिक राजीनामा दिएर आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको छ । सिमांकन सहित भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा संविधान सं.. .. ..
सीके राउतलाई पाँचौपटक १० दिनको म्याद थप
काठमाडौं, १२ चैत । राज्यविरुद्ध संगठित अपराध मुद्दामा रापक्राउ परेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धका संयोजक डा. सीके राउतलाई सिरहा अदालतले शुक्रबार पाचौं पटक थप १० दिन थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
माघ ५ गते सिरहाको लहानमा आयोजित सभामा देश टुक्र्याउने अभि
मधेसवादी दललाई डा. भट्टराईको सुझाव : सिमाङ्कनसहितको मुद्दा सम्बोधन पश्चात मात्र निर्वाचनमा जानुस्
महोत्तरी, १० चैत । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सिमाङ्गनलगायतका मुद्दालाई सम्बोधन पश्चात मात्र निर्वाचनमा जान मधेसवादी दलका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
संसदीय टोली पुग्यो सप्तरी, मलेठ गोलीकाण्डको छानबिन सुरु
राजविराज, १० चैत । सप्तरीको मलेठ गोलीकाण्डको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय संसदीय छानबिन टोली मलेठ गाउँ पुगेको छ । सांसद् मोख्तार अहमद संयोजक रहेको संसदीय छानबिन टोली सदरमुकाम राजविराजबाट तीन किलोमिटर उत्तर पर्ने मलेठ गाउँ पुगेको हो ।
मधेशीले विखण्डन होइन्, देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने लक्ष राख्नुपर्छ : डा. भट्टराई
- धर्मेन्द्र पासवान
सिरहा, ९ चैत । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संघीयतको मुद्दा टुंगोमा पुर्याएर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सिरहाको लाहानबाट नयाँ शक्ति पार्टीले
सप्तरी घटनाको वास्तविक तथ्य बाहिर आयो, यस्तो भएको थियो त्यो दिन
सप्तरीमा एमाले सभा सकिनै लाग्दा अकस्मात् गोली चलाइयो । पाँच नागरिक मारिए । एमाले र मोर्चाको प्रतिष्ठाको त्यो लडाईंमा जो मारिए तिनको अभियान र आन्दोलनसँग कुनै सम्बन्ध थिएन । सप्तरीबाट फर्केपछि खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि सरोजराज अधिकारीको रिपोर्ट :
संसद बैठक : मधेसी मोर्चाबाट बहिष्कार, राप्रपाद्धारा संशोधन प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं, ६ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले आफूहरुले प्रमुखताका साथ उठान गरेको संविधान संशोधनको माग पूरा नगरिएको जनाउँदै सदनको बैठकमा भाग लिएनन् ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले सदनको आजको बैठक सु